Email Vashandi veVanopa Vakasvetuka iyo Shark | Martech Zone
Email Vashandi veVanopa vakasvetuka iyo Shark
Mugovera, Kukadzi 20, 2010 Svondo, June 28, 2015 Douglas Karr
Kana usina kumbobvira wadzidza kuti izwi rekuti "Svetuka Shark" rinorevei… zvinoreva kuti ndiko kutanga kwekuguma. Izwi iri rinoreva Mazuva Anofara apo Fonz akasvetuka shark pamvura skis, achikanda iyo showa murufu kutenderera iyo isina kuzombopora kubva.
Kana iwe uri email service provider, usandidanidzire kwandiri asi.
Email yaimbove iri basa rakaoma kwazvo uye ivo chete vakatumira vane tarenda, Hardware, uye mafomu ekutumira akawanda mavhoriyamu eemail kune Internet Service Provider kumakambani ane hombe ekunyoresa mazita. Tarenda yatanga kufamba-famba muindasitiri, iyo Hardware yave kuwanda (kunyanya neiyo gore) uye kunyorera kuri kubuda kuruboshwe uye kurudyi kutumira email.
Indasitiri yeemail Yachinja… zvakachipa uye zviri nyore izvozvi
Izvo zviri kuitika muindasitiri kuwanda kwediki email service providers kubuda. Izvo zvinonakidza - zvine maitiro makuru, tumira mameseji akaomarara akasimba, tevera zvakakwana, bata mabhureki, nyaya dzekuendesa, kutevedzera SPAM zvirevo, uye vane nzira dzakasimba kwazvo dzekubatanidza idzo dzakajairika mahara. Uye ivo vari kuzviita pachikamu chemutengo wevakomana vakuru.
Heino muenzaniso: Newsberry ndangova mutsigiri we Martech Zone (ndiko kufumurwa kwangu). Pandakanga ndichitarisa yavo saiti ndisati ndatendera kushambadza, ndakatarisa peji ravo remitengo uye ndakashamiswa nemitengo:
Ini ndinogona kuve neanyorerwo runyorwa anosvika zviuru zana uye tumira zvisingagumi maemail kwavari $ 530 pamwedzi? Izvo zvishoma kudarika $ 6,000 pagore. Ndinoyeuka pandakashanda kumubatsiri weemail kuti mari yedu yegore rega yebhizinesi diki yaive pamusoro peiyo… pamwe nemari yekutumira mameseji… pamwe API kuwana… kuwedzera, kuwedzera, kuwedzeredza…
Aya anoshamisa akasimba emaemail vanopa vacharamba vachipfura kunze uye mabhizinesi anotumira maemail ndivo vanozove vanokunda vese. Vanokundwa ndivo vakakura kwazvo vapi vevashandi veemail avo vanga varipo kwekanguva - chimwe chinhu chinoda kuchinja.
Makuru maSevhisi Evhisi Vanopa Vanowedzeredza Clout yavo paKununurwa
Mazhinji evakuru vevapi vevashandi veemail vanokuudza kuti mavhoriyamu eemail avanotumira anovapa iwo clout muindastiri uye vane zvirinani dhirivhari zviyero uye hukama neInternet Service Provider.
Haisi chokwadi. Vechidiki Email Service Vanopa vanogona kungoita rakakura basa.
Shamwari yangu yakanaka Greg Kraios anotarisira humwe hwehukama ihwohwo pakati pevapi vevashandi veemail nevapi vepainternet nekambani yake, Den reKununurwa. Iye anotobatsira makambani ano maneja yavo yega email kuenda kune iyo ISPs! Hazvitore kambani hombe - zvinotora nyanzvi yekununura nehukama hwakanaka - uye Greg anazvo.
Ndezvipi Email Vatengi Vanoda
Email vanopa sevhisi vanofanirwa kunge vasina musono (uye ndinoreva musoni) inosanganiswa nehurongwa hwe manejimendi, masisitimu ehukama hwevatengi, maturusi ekugadzirisa peji, uye analytics kunyorera. Kushambadzira michina vatengesi vakaita Aprimo uye Eloqua vave kutobuda kunze kutungamira pane izvi. Hazvina kukwana kutumira uye kuyera email futi… makambani anoda zvimwe!
Kunyangwe zvidiki, zvine mwero mutengo wekutumira email mhinduro dziri kubuda, futi! Infusionsoft iri mhinduro ine email uye yevatengi hukama manejimendi mhinduro dzakabatanidzwa zvizere.
Vatengi vanofanirwa kudzokorora zvirinyore zvirimo kubva kune ese masvikiro, zvine simba kugadzirisa zvinyorwa pane nhunzi, kuyera mhedzisiro - uye kunyangwe kupihwa mhinduro kune izvo zvakahwina uye zvakarasika. Hatina nguva yekusvetuka kubva kune mutengesi mhinduro kune mutengesi mhinduro mukati mezuva… uye edza kusunga zvese analytics querystrings pamwechete… uye ongorora mikana. Email vanopa sevhisi vanofanirwa kushanduka kune zvatinoda.
Yasvika nguva yevapi vevashandi veemail kutora iyo leap, kana kuti ivo vanozopepetwa ne. Mailchimp yakazivisa 250,000 maakaundi akawedzerwa mumwedzi 7 kumhinduro yavo. Asi kunyangwe Mailchimp yakadhura zvinotyisa sezvo isu takakura runyorwa rwedu zvinobudirira. Takaneta nemabhiri makuru emwedzi nemwedzi saka takavaka CircuPress - yakanaka, izere WordPress yakasanganiswa mhinduro email iri kutiponesa svumbunuro uye inogadzira matsamba edu.
Ita-I-Iwe Pache Email Anopa Sevhisi
Email yakave neyakareba, ine mari kumhanya - asi zvave kuda kupera. Hazvitore nhamburiko zhinji kuvaka nekuchengetedza yako yega sevhisi sevhisi mazuva ano. Shamwari Adam Mudiki akaguta nemitengo uye kushomeka kwemaotomation nzira, zvekuti iye achangobva kuzvivakira yake Agent Sauce… Iye zvino ave nharembozha, zvemukati manejimendi, Facebook, Twitter uye email zvakanyatso kubatanidzwa kune vake real estate vatengi. Iye anotokwanisa kuongorora kuendesa, track inovhura uye kudzvanya uye kubata ma bounces!
Kana iwe usina tarenda saAdamu, unogona kuenda kunotenga bhokisi kubva kuvanhu vakaita Yakasimba, chivharise mukati, chibatise, uye uve neyako email sevhisi kumusoro uye inoshanda. Ivo vanotozokubatsira iwe kutanga.
Ita-It-Ye-Iwe Email Vesevhisi Vanopa
Vazhinji vanopa maemail vanopa uye vamiririri vari kunyatso kuwedzera iyo sevhisi kupakeji zvakare. Ivo vanoziva kuti kuvaka akanaka, anomanikidza maemail anotora ese nguva uye hunyanzvi - uye ane kudzoka kukuru mukudyara, saka ivo vanogadzira zvirongwa zvevatengi vavo izvo zvinodhura uye zvinotora zvese kuedza kubva mumaoko evatengi. Vaviri vandinoziva avo vari Indiemark uye Tomatofish.
Maitiro Eemail Service Vapi Vachararama
Zano rangu kune makuru evanopa email sevhisi kunze uko ndeyekutsvaga zvemukati manejimendi sisitimu, uye uitenge. Tsvaga mutengi wehukama manejimendi manejimendi iwe waunobatanidza padhuze ne… uye ubatanidze navo. Tora iyo analytics Provider, uye musono inosangana. Uye uzviite nekutarisa kwakasimba, zvikamu uye mhinduro dzekuyedza. Ukasadaro, mumwe munhu achakurumidza!
Tags: circupressemail service providerkunyanyamailchimp
Nongedzo ina Dzinogona Kuverengwa Webhu Zvemukati
Real Estate & Yemagariro Media Kubatanidzwa
Kukadzi 20, 2010 na3: 44 PM
Ichi chinyorwa chikuru Doug. Pane akawanda mhinduro anowanikwa izvozvi kubatsira bhizinesi kukwenya pamusoro pekutengesa email. Ini ndinotenda zvechokwadi kuti mukana weeESs mazhinji ndizvo chaizvo zvavakapedza makore vachidzivisa - uye ndihwo mabasa. Kunyange ichinyanya kubatsira kutengesa uye kutsigira software, ichi ichiwedzera kuoma kutengesa kana musika ukaguta sezvawakave. Kana ESPs dzichikwanisa kupa makambani budiriro inooneka (inopfuura software, asi tenga muto-kun-nzungu kuronga mushandirapamwe, dhizaini, uye kuuraya) - iyo yakakosha nzira kupfuura kutsvaga chishandiso chekutumira email (90% yeemail kushambadzira software mashandiro zvakafanana chaizvo). Sanganisa iwo masevhisi neakasimba ekubatanidza mapoinzi iwe une package yakakodzera kubhadhara.
Feb 22, 2010 at 10:11 PM
Ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvangu zvitsva zvandinoda, uye kwete chete nekuti iwe unopa Indiemark kugutsurira. 🙂
Kukadzi 24, 2010 na5: 05 PM
Ini ndinowanzo farira kugadzira email mupfupi mapfupi uye bhachi reganda. Izvo hazvitonhore here? Chinyorwa chikuru. Muchikamu chekuitira-iwe-iwe-sevhisi masevhisi, ndinoda kukanda mu davemail (www.mydavemail.com) sesarudzo. Vatengi vedu kazhinji vanorega kuedza kuzviita ivo pachavo. Sezvo zvakaomesesa sevazhinji vepa online DIY vanopa vari, ivo havasi vevanhu vese. Ndatenda nekutsanangura sarudzo.
Mar 19, 2010 pa 1: 47 PM
Unhu hweVatengi Dhata ndiyo kiyi yekubudirira mune chero mishandirapamwe yekushambadzira. Iko kune chaiwo makambani akawandisa ayo anopa yega-sevhisi kushambadzira email kana kuita yakazara-sevhisi kushambadzira iwe. Asi, hapana kana mumwe wavo anogona kuuya nemutengi data kunze kwako iwe nebhizinesi rako.
Bhizinesi (chitoro-kumberi's kunyanya) inoda kutsvaga nzira "yekuunganidza" ruzivo rwevatengi uye "kurisunga" kuti vadzokere kuzvinhu zvavanotenga (izvi zviri nyore nyore kuzvitoro zvepamhepo, asi kwete chaizvo kune epanyama zvitoro-kumberi) mune ako POS masisitimu uye ita kuti ruzivo irworwo ruwanikwe kune yako yekushambadzira chikuva (email kana sms kana imwe). Simba rechokwadi rekushambadzira riripo mukuongorora zvinodiwa nevatengi uye izvo zvavasingadi uye nekuzvitarisa nekupihwa kwakakodzera.
Jun 13, 2012 pa12: 56AM
Mhoroi ndatenda zvikuru nekuda kwekunzwisisa, ini ndanyatso kuwana bhurogu yangu nekukanganisa ndichitsvaga paGoogle nezve chimwe chinhu… .Ndakaisa bookmark yako saiti..chengeta kugovana ..
Apr 29, 2013 pa 1: 29 AM
Ndiri kutarisa kana paine webmail vanopa vanogovana purofiti nevanhu vanoendesa avo maseru mazita ekushandisa tsamba?